Siyaasada Shidaalka Somalia | Arimaha Bulshada
August 9, 2007 at 4:44 pm | Posted in Siyaasada Shidaalka Somalia | Leave a comment
Dowladda KMG ah oo ku howlan abuurista Shirkad Qaran oo shidaalka soo saarta.
Dowladda Somalia ayaa ka fekereysa inay aas aasto shirkad qaran oo shidaalka soo saarta, ayada oo 49% heshiis shidaal baaris ah siineysa shirkadaha PT Medco Energi Internasional Tbk ee dalka Indonesia iyo Kuwait Energy Company ee dalka Kuwait.
Document-yo ay heshay wakaaladda wararka ee Reuters, oo cinwaan looga dhigay “Siyaasada Shidaalka Somalia”, ayaa tilmaameysa in labadaas shirkadood, ay saamigooda ka heli doonaan shirkadda Somalia Petroleum Corp 31-ka bishan august.
Si kastaba, taasi waxa ay ku xirnaan doontaaa, in la ansixiyo shirciga saliida qaranka, oo weli sugaya in baarlamanka ay ka doodaan.
Ra’iisul Wasaare Cali Maxamed Geedi, ayaa la rumeysan yahay inuu aad ugu kulul yahay inuu arko sharciga qabyada ah, ee lagu maamulayo sahminta saliida iyo gaaska Somalia, oo si deg deg ah loo ansixiyo.
Sharcioga waxaa horey u ansixiyay Golihiisa Wasiirada bishii February.
Document-ga ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters, ayaa sidoo kale sheegaya in Wasiirka shidaalka Somalia uu ansixin doono saddex ka mid ah 7 agaasimayaal oo Shirkadda cusub ay yeelan doonto, kuwaasi oo laba ay ka iman doonto Medco, mid kalena dhinaca shirkadda Kuwaiti-yaanka.
Waxaa jira 7 sarkaal oo ka tirsan shirkadahaasi ajniba, kuwaasi oo document-ga Dowladda Somalia lagu qoray, si ay Dowladda la taliyayaal ugu noqdaaan, waxaana ku jira Gudoomiyihii Medco Hilmi Panigoro iyo Madax fulinta shirkadda Kuwait energy Sara Akbar.
Heshiiska wax soo saarka ayaa dhigaya in Dowladda Somalia iyo shirkadaheeda ay qaataaan 1.2 Bilyan oo Doollar ama 69% dakhliga, hadii 50 milyan oo barmiil la soo saaro, ayada oo halkii barmiil lagu qiimeeyay 50$.
Hadii wax soo saarka uu intaas kasii kordho oo uu gaaro 350 milyan oo barmiil, Dowladad Somalia, waxa ay heli doontaa 9.1 Bilyan oo Doollad ama 72.8%, sida ku cad document-ga.
Illaa iyo hadda wax hadal ah kama aanu soo bixin saraakiisha Dowladda KMG ah ee Somalia.
Saliida ayaa noqotay muran ka taagan Somalia, ayada oo khubaradana ay sheegayaan in halgan awoodeed ay ka dhex abuurtay Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo Ra’iisul Wasaare cali Maxamed Geedi, oo isku heysta xuquuqda sahminta.
Bishii tagtay jariiradad Financial Times, waxa ay shaaca ka qaaday in Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf uu heshiis shidaal lagu soo saaray la saxiixday shirkadda CNOOC ee dalka Shiinaha.
Hase yeeshee jariiradad British-ka waxa ay tiri in Geedi uusan ka war qabin heshiiskaas.